Reflexio Ilu Ihe Onyonyo - Imewe Mmewe
Ilu Ihe Onyonyo
Fraịdee 27 Mee 2022
Ilu Ihe Onyonyo Ihe omumu ihe omuma banyere ihe n’ile n’ujiko echiche a n’ile n’edeputa ya na akwukwo ozi edeputara n’otu n’ime ya. Ọ na - arụpụta ihe n'ụdị ndị modular na - eseburu na - egosi foto 3D. Ihe oru ngo a na - eji anwansi na mmegodi ihe nlere anya si na uzo dijitalụ gaa uwa analog. Mpempe akwụkwọ ozi enyo enyo gosipụtara ihe ọhụụ na ntụgharị, nke abụghị eziokwu ma ọ bụ ụgha.
Aha oru ngo : Reflexio, Aha ndị na-emepụta ya : Estudi Ramon Carreté, Aha onye ahịa : Estudi Ramon Carreté.
Ilu Ihe Onyonyo Estudi Ramon Carreté Reflexio